Kylian Mbappe Wuxuu Ka Tagayaa Kooxda PSG Waxaana Isha Ku Haya Kooxaha Man United Iyo Liverpool? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Weeraryahanka reer France Kylian Mbappe ayaa lagu soo waramayaa inuu u sheegay PSG inuu doonayo inuu baxo, waxaana uu doonayaa inuu u wareego midkood Liverpool ama Manchester United oo ka dhisan Premier League.
Kylian Mbappe ayaa si xamaasad leh ugu sheegay Paris Saint-Germain inuu doonayo inuu ka tago Parc des Princes, sida ay sheegayaan wararka.
Mbappe ayaa haatan bartilmaameed u noqon doona midkood England ama Spain, iyadoo labada Manchester iyo Liverpool ay diirada u saaran yihiin, sida laga soo xigtay The Times.
Weeraryahankan ayaa u muuqda mid ku wargaliyay kooxda heysata horyaalka Faransiiska inuu doonayo inuu baxo dhamaadka xilli ciyaareedkan, isagoo siinaya waqti ay ku abuuraan lacag kala iibsiga iyo ilaha bedelka.
Mbappe ayaa qalinka ku duugay heshiis shan sano ah oo uu kula joogayo Paris 2018, isagoo 165 milyan oo ginni ugala soo wareegay Monaco, waana lacagtii labaad ee ugu badneyd ee abid lagu bixiyo ciyaaryahan.
Waxa uu diiday inuu u dhaqaaqo Real Madrid iyo Manchester City si uu ugu biiro waxaana uu dhaliyay 77 gool 102 Ligue 1 iyo Champions League tan iyo markii uu yimid caasimada Faransiiska.
Real iyo El Clasico oo ay xafiiltamaan Barcelona labaduba waxay xiiseynayeen inay qaataan Mbappe haddii uu miro dhal noqdo ka tagistiisa PSG, laakiin wuxuu horay uga hadlay sida uu u jecel yahay Liverpool.
“Waxa ay Liverpool sameysay xilligan waa wax la yaab leh,” ayuu yiri bishii Janaayo. “Waxay la mid yihiin mashiin, waxay heleen qaafiyad waxayna u eg yihiin ‘mar kale ayaan ciyaareynaa, mar kale ayaan ciyaareynaa’.
“Markaad daawato waxaad u maleyneysaa inay wax walba fudud yihiin, laakiin taasi maahan wax fudud. Ragga ayaa diiradda saaraya, waxay ciyaaraan seddexdii maalmoodba mar waana guuleystaan, way guuleystaan, way guuleystaan.”